'सबै किसान हाम्रा लागि बराबर हुन्, काम गर्न चाहनेलाई सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन' | NewsKarobar
गृहपृष्ठ ‘सबै किसान हाम्रा लागि बराबर हुन्, काम गर्न चाहनेलाई सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन’
‘सबै किसान हाम्रा लागि बराबर हुन्, काम गर्न चाहनेलाई सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको करिब अढाई वर्ष पुगेको छ । सरकार गठन पछिको यस अवधिमा धेरै कृषि क्षेत्रको विकास गरेको प्रदेश सरकारको दावी छ । यो अढाई वर्षे अवधि कस्तो रह्यो ? सरकारले कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको छ ? कृषिमा सबैलाई आत्मनिर्भर बनाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गराउन प्रदेश सरकारले के-कस्ता योजना ल्याएका छन त ? यस्तै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चौधरीसँग न्युज कारोबारका प्रदेश संयोजक दिनेश बिष्टले गरेको कुराकानी :
प्रदेश सरकार गठन भएको अढाई वर्ष पुग्दैछ । सरकारले हालसम्म कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेर किसानहरुलाई लाभान्वित गरिरहेको छ ?
देश संघीयतामा गएर नयाँ संरचना बनिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार आए । पहिलेदेखि नै कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज त उठे तर पहिला जति लगानी हुनुपर्ने थियो त्यति भएन । प्रदेश सरकार आइसकेपछि पुर्ख्याैली पेसा कृषि व्यवसायतर्फ केन्द्रित भएको छ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणतर्फ कसरी लैजान सकिन्छ भनेर प्राथमिकतामा राख्द कृषिलाई बढावा दिएर बेरोजगारी समस्या अन्त्य गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमै लगानी बढाउने विषयमा सरकारले जोड दिएको छ । जस्तै कृषितर्फ, फलफुल, खाद्यान्न बाली, पशुपालनलगायत थुप्रै क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ ।
त्यसअनुसार नै कयौँ किसानहरु अहिले व्यवसायिकतातर्फ गइरहेको अवस्था हो । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्दै अहिले किसानहरुलाई व्यवसायतर्फ ल्याउन हामी सफल भएका छौँ । हामीले सानो लगानी मात्रै हैन ठुलो लगानी पनि गरिरहेका छौँ । सबै किसिमका किसानहरुलाई अनुदान दिएर उनीहरुलाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गरिरहेका हौं । प्रदेश सरकारले तालिमसँगै औषधिउपचारमा समेत किसानलाई सहयोग गरेको छ । त्यहीअनुसार किसानहरु लाभान्वित पनि भएका छन् । प्रदेश सरकारको अनुदानले किसानहरु अहिले पक्कै सरकार भएको अनुभुति गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारकै सहयोगका कारण कृषितर्फ युवाको आकर्षण पनि बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिमा लगानी गर्दा कस्तो वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
अहिले हामीले निम्न वर्ग, मुक्त कमैया, हलिया, दलित, पिछडिएको वर्गलाई शतप्रतिशत अनुदान दिइरहेका र्छौं । त्यसपछि जो कृषक आफू पनि केही लगानी लगाउन सक्ने अवस्थाका छन्, उनीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइरहेका छौँ । यसरी अनुदानमा वर्गीकरण गरेका र्छौं । साथै जुन अहिले सहुलियत कर्जा चाहिन्छ भन्ने किसानको माग थियो यो आर्थिक वर्षमा सहुलियत कर्जा, ब्याजमा अनुदानलगायत थुप्रै कुरा समेटेका छौँ । यसरी हामीले कृषकहरुलाई वर्गीकरण गरेर अनुदान दिइरहेका छौँं । किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, बजारीकरणको अभाव भएका किसानहरुको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने लगायतका काममा सरकार केन्द्रित छ ।
त्यसो भए अनुदानबाटै बञ्चित भयौं भन्ने किसानको गुनासो छैन ?
सबै समेटिएका छन् । पहिले पनि अनुदानका कार्यक्रम आउँथे तर पहुँचका भरमा अनुदान बाँडिन्थे । सबै किसानसम्म सूचना नै पुग्दैन थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तह आइसकेपछि सबै किसानसम्म सूचना पुगिरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई समेत सूचना पुर्‍याएका छौँ । तर सबैलाई एकैपटक दिनसक्ने कुरा हुँदैन । प्राथमिकताका आधारमा अनुदान दिएका छौँ । सबैसँग पुगेन भन्ने गुनासो त आउँछन्, तर पनि आर्कोपटक उनीहरुलाई समेट्ने छौँ । जुन व्यक्ति वर्षौँदेखि कृषिमा लागेका थिए, उनीहरु अनुदान नभएकै कारणले व्यवसायिक कृषिमा जान सकेका थिएनन । प्रदेश सरकार आएपछि उनीहरु व्यवसायिक बनेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।
वास्तविक किसानभन्दा पहुँचका भरमा अनुदान बाँडियो भन्ने पटक-पटक गुनासो आइरहेको हुन्छ नि ?
अब यो अनुदानको विषयमा अहिले मात्रै हैन विगतदेखि नै गुनासो आइरहेकै हो । हामीले कुनै पनि चिज एकैपटक दिन सक्दैनौं । हामीले योजना दिने हो, किसानले लागू गर्ने हो, उसले अनुदान पाइसकेपछि काम गर्नुपर्छ भनेर उसले पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । हामी यो विषयमा अनुगमन कडा गर्नुस् भनेका छौँ । यदि सम्झौता गरेर काम गरेको छैन भने त्यसलाई असुलउपर जरिवाना लिनुपर्छ भनेका छौँ । गत वर्ष पनि प्रक्रिया नपुगेकै आए, हामीले रोक्यौं । सबै ठाउँमा काम गर्न खोजेका छौँ अनुगमनको पाटो कमजोर भएको अवस्था हो ।
केही किसानले गल्ती गर्दा समस्या सिर्जना हुन्छ । काम गर्ने व्यक्तिलाई हामीले प्रक्रिया पुर्याएर अनुदान दिएका छौँ । जहाँसम्म पहुँचका भरमा अनुदान दिइन्छ भन्ने छ, त्यो गलत हो सबै किसान हाम्रा लागि बराबर हुन् । प्रदेशभरिका किसान प्रदेश सरकारको आश गरेर बसेका छन् । काम गर्नेलाई हामीले अनुदानबाट वञ्चित गरेका छैनौं । सबै हाम्रा किसान हुन् । हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । पहुँचको आधारमा भन्ने भ्रम हो । अनुदान मिलोमतोमा र पहुँचका भरमा आउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो आजै त्याग्नुस् । कुनै ठाउँमा गलत भएको छ भने प्रमाण ल्याएर आउनुस् । गलत गर्नेलाई कारबाही गरेर गलतको हामी अन्त्य ग छौँ । वास्तविक नबुझेरै विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्नु राम्रो होइन ।
कोरोना महामारीपछि विदेशमा रहेका २ लाख नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरु स्वदेशमै रोजगारी पाइयोस् भन्ने चाहानामा छन् । उनीहरुलाई प्रदेशमै रोजगारी दिनका लागि के योजना बनाउनु भएको छ ?
अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु अघि सारेका छौँ । हामीले कम्तीमा ९ हजार युवालाई कृषिमा रोजगारी दिन् छौँ भनेका छौँँ । हामीले त्यही आधारमा कार्यक्रम बनाएर बाहिरबाट आएकालाई मात्रै नभई स्वदेशमै भएका बेरोजगार युवालाई पनि रोजगारी दिनेगरी योजना बनाएका छौँ । कुन युवाले के क्षेत्रमा काम गर्न चाहान्छ त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ । साथै प्रदेशमा रहेको बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेदेखि लिजमा जमिन लिएर काम गर्नेको केही महिनाको भाडासमेत तिरिदिने निर्णय गरेका छौँ ।
हामीले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण, ब्याजमा अनुदान, किसानको ऋणको ब्याज तिरिदिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ । हामीले कृषिबाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि बिपद व्यवस्थापन गर्न बिमाका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । अहिले हामीले बाँझो जमिनको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ । भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएका छौँ । प्रदेश सरकारले आफैँ लगानी गरेरसमेत कृषि फर्म खोल्ने तयारी गरेको छ । हामीले काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई सहयोग नगर्ने कुरै हुँदैन ।
कोरोनाकै कारण किसानले धेरै क्षति ब्यहोरोका छन्, उनीहरुको व्यवसाय माथि उकास्न सरकारले के गरिरहेको छ ?
बाहिरबार आएका जनशक्तिसँगै कोरोनाले घाटा ब्यहोरेका किसानलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन सहुलियत ऋण दिने लगायतका कार्यक्रम ल्याएका छौँ । कसरी सहयोग गरेर किसानहरुलाई पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छौँ भनेर हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ । उनीहरुलाई केही न केही राहत दिन्छौँ ।
अन्त्यमा, किसान तथा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने प्रदेशवासीलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको विषम परिस्थितिमा थुप्रै चुनौती आएका छन् । एकातिर रोजगारी दिनुपर्ने छ । भोकमरी पो आउँछ कि भन्ने चिन्ता छ । आर्थिक अवस्था सबैको नाजुक भएको छ । त्यसैले अबको विकल्प कृषि नै हो । काम गर्न हिच्किचाएर हुँदैन । सबैले सबैको क्षेत्रबाट सहयोग गरौँ । किसानले सरकारलाई सहयोग गरुन्, सरकार किसानका पक्षमा छ । कसरी प्रदेशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकार किसानका उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने कुरामा समेत पछि हट्ने छैन । किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ । किसानले ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । पक्कै हामी कृषिमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ ।
प्रकाशित समय १९:३३ बजे
पछिल्लाे - चन्दा असुलिरहेका ३ जना विप्लप कार्यकर्ता पक्राउ
अघिल्लाे - १४ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, ५ जना पक्राउ